Seth Nkọwa banyere nwebiisinka na copywrongs na agha kachasị ọhụrụ n'etiti MPAA na ụlọ ọrụ na-ebu ihe nkiri na IPods. Nke a bụ Mgbanwe Ọchịchị French ugboro ugboro… Egwuregwu thentanetị. Ndị RIAA (King Louis) na MPAA (Marie Antoinette) nọ na nsogbu. Azụmaahịa ha (The Bastille) na-ebugharị (site na )ntanetị) ha ga-emesị tufuo isi ha. Kama imeghe ụzọ ochichi onye kwuo uche ya, ha ga-aka mma karịa “ka anyị rie achicha” ma gaa n'ihu na-akwado ịba ụba nke akụ na ụba na njikwa nke ụlọ ọrụ ntụrụndụ.
Ntughari aka nke ndi France (1789â ?? 1799) bu oge di nkpa n’akụkọ ihe mere eme nke French, Europe na Western. N'oge a, ọchịchị republican nọchiri ọchịchị kpamkpam na France, a manyere Chọọchị Roman Katọlik nke mba ahụ ịmalite nhazigharị dị egwu. Ọ bụ ezie na France ga-agbagha n'etiti mba, alaeze, na ọchịchị nke alaeze maka afọ 75 mgbe Republic Republic nke mbụ dabara na mgbanwe ọchịchị, a na-ahụ mgbanwe mgbanwe ahụ dịka isi mgbanwe na akụkọ ntolite nke Ọchịchị onye kwuo uche ya from. nkwenye na ndi ochichi, rue oge ndi amaala dika ndi isi ochichi - Wikipedia
Ndị nwenụ (Ndị Ntụrụndụ Ntụrụndụ) ga-efufu isi ha, n'agbanyeghị ole ndị ọka iwu (ndị isi) ha na-akpọ ndị mmadụ. Agụba ga-ada na aristocracy, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Echere m na naanị agbachitere ha hapụrụ bụ ịnwa ịgbapụ penny ọ bụla ikpeazụ n'ime ndị ọrụ ugbo ọ bụla iji gbalịa ịkwado ya feudal ọha mmadụ na akọ nke ga-akwado ndụ ha dị ka eze.
Louis na Marie zutere akara aka ha n'ihi na ọ nweghị ụzọ ndị mmadụ ga-esi kwụchitere ha. Jọ na RIAA na MPAA nọ n'otu ọnọdụ. Na-enweghị nkwado ndị mmadụ, anyị agaghịzị anọdụ ala ma rie achicha. Alaeze ukwu ahụ ga-ada.